Popular software – Android – Page 2 – Vessoft
Popular software – Android – Page 2
System nokwenza The kulula ukuyisebenzisa application ukuhlanza nokwandisa uhlelo idivayisi. Isofthiwe isekela amathuluzi amaningana ukuqapha isimo uhlelo futhi ulungise iphutha.
English, Українська, Français, Español... Badoo 4.54.2
Inethiwekhi Yokuxhumana Ithuluzi ukuxhumana inethiwekhi ethandwayo social ne abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukubuka izivakashi page kanye nokulinganisa izithombe.
English, Español, Português, Italiano... Opera 37.0.2192.105088
Inethiwekhi Yokuxhumana Uhlelo lokusebenza ukubuka okuqukethwe ezahlukene kanye ukuxhumana nabangane yokuxhumana. Isofthiwe inikeza abasebenzisi nokuhlala ezithakazelisayo futhi okuthakazelisayo enkonzweni.
Downloaders Ithuluzi ukulanda futhi sihlanganyele amafayela inethiwekhi BitTorrent. Isofthiwe inikeza search fast amafayela futhi liqukethe imiyalezo esakhelwe.